Sidee si fudud loogu dilaa howlaha | Laga soo bilaabo Linux
Asal ahaan waxaa jira Jidadka 4 de dilaan wax ku ool ah a habka en Linux: ku dil magaca, adoo qeexaya qayb ka mid ah magaca, PID, oo tilmaamaya daaqadda nidaamka ee tilmaamaha jiirka. Aan mid mid u aragno ...
1 Dila: dil nidaamka adoo adeegsanaya PID
2 killall: dil hawl adoo adeegsanaya magaceeda
3 pkill: disho geedi socodka adoo adeegsanaya qeyb ka mid ah magaceeda
4 xkill: ku dil geeddi-socodka adiga oo dooranaya daaqadda jiirka
5 Faallooyinka ugu dambeeya
Dila: dil nidaamka adoo adeegsanaya PID
Qaabka ugu qalafsan laakiin isla waqtigaas habka ugu saxsan ee loo dilo geedi socodka waa iyada oo loo marayo PID-keeda ("Aqoonsiga Habka"). Mid kasta oo ka mid ah seddexdan nooc ayaa u adeegi kara:
dilaan -TERM pid dil -SIGTERM pid dil -15 pid
Waxaad isticmaali kartaa magaca calaamadda (TERM ama SIGTERM) ee aad rabto inaad u dirto nidaamka ama lambarkiisa aqoonsiga (15). Si aad u aragto liistada buuxa ee calaamadaha suurtagalka ah, waxaan soo jeedinayaa hubinta buugga dilka. Si tan loo sameeyo, orod:
Aan aragno tusaale sida loo dilo Firefox:
Marka hore, waa inaad raadisaa PID ee barnaamijka:
ps -ef | buuxi Firefox
Amarkaas ayaa soo celin doona wax sidan oo kale ah:
Waxaan u adeegsannaa PID oo ay soo celisay amarka kor ku xusan si aan u dilno hawsha:
dil - 9 1986
killall: dil hawl adoo adeegsanaya magaceeda
Amarkani waa mid aad u fudud
Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in maanka lagu hayo marka la adeegsanayo qaabkan ayaa ah in haddii ay jiraan wax ka badan hal tusaale oo barnaamijkaas socda, dhammaantood la xidhi doono.
Cron & crontab, ayaa sharaxay
pkill: disho geedi socodka adoo adeegsanaya qeyb ka mid ah magaceeda
Waa suurtagal in la dilo hanaan adiga oo qeexaya magaca oo buuxa ama qayb ka mid ah magaca. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan loo baahnayn inaad xasuusato nidaamka PID si aad u dirto calaamadaha.
magaca pkill part_process_name
Soo noqoshada, qaabkani wuxuu dili doonaa dhammaan geeddi-socodka ay ku jiraan ereyga la galay. Taasi waxay ka dhigan tahay haddii aan helno 2 geeddi-socod oo furan oo erey ku wadaaga magaca, labadaba waa la xirayaa.
xkill: ku dil geeddi-socodka adiga oo dooranaya daaqadda jiirka
Tani waa habka ugu fudud uguna macquulsan. Haddii ay dhacdo musiibo, si fudud u riix Alt + F2 si aad u keento sanduuqa wada hadalka ee kuu oggolaanaya inaad fuliso amarrada. Halkaas, ka soco amarka soo socda:
Calaamadda jiirka ayaa isu beddelaysa dhakad yar. Waxa kaliya ee haray ayaa ah inaad gujiso daaqadda aad rabto inaad xirto iyo voila. Geedi socod
Faallooyinka ugu dambeeya
Markii aan soo afjarayay, waxaan doonayay inaan la wadaago talooyin waxtar u leh. In Linux, sida Windows, marka hawshu sudhan tahay, daaqada su'aasha ah guud ahaan waa la xiri karaa adigoo gujinaya badhanka Close (oo u eg X) Dhowr ilbiriqsiyo ka dib, daaqad ayaa noo soo muuqan doonta iyada oo na weydiineysa haddii aan dhab ahaantii dooneyno inaan dilno hannaanka maadaama uusan si sax ah uga jawaabin. Waxaan dhahaynaa haa waana intaas.
Tan macnaheedu waa in qaababka halkan lagu sharaxay ay tahay in la isticmaalo marka aysan waxba dhicin markii aad gujiso badhanka Close ee daaqadda su'aasha laga hadlayo.
Haddii ay dhacdo musiibo weyn, ha ilaawin ka hor intaadan cadaadinin inay suurtagal tahay in la fuliyo a dib u bilaabi "aamin ah".
Ugu dambeyntiina, waxay noqon kartaa mid waxtar badan leh in la ogaado geeddi-socodka hadda socda. Tan awgeed, bii'adaha kala duwan ee desktop-ka (GNOME, KDE, iwm.) Waxay leeyihiin aalado jaantus ah oo fududeynaya howshan. Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo inaad iyaga ka heli weydo ama aad rabto inaad ka sameyso terminaalka, waad fulin kartaa waxyaabaha soo socda:
Haddii ay taasi shaqeyn weydo ama aadan haysan xirmo u dhiganta oo la rakibay, marwalba waad ordi kartaa:
Tani waxay qori doontaa dhammaan howlaha socda, oo ay la socdaan magacyadooda iyo PIDs.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Sidee si fudud loogu dilaa howlaha
«Ps -ef | "grep Firefox" maahan mid la mid ah "pgrep Firefox"?
Hagaag shaqsiyan waxaan u isticmaalaa "pidof" si aan u helo PID.
Jawaab Jerónimo Navarro
waxa ugu badan ee aan isticmaalo waa:
~ $ sare
ina tusaya liiska howlaha firfircoon, ka dib hadaan ku garaacno «k» ama ku qorno «dil» waxay na weydiin doontaa pid ka mid ah geedi socodka inay dilaan (kor ayaan ka akhrinaa) ka dibna waan galeynaa, si aan uga baxno xagga sare waxaan ku riixnaa "q".
Gelitaan aad ufiican, laakiin foomkaan wuxuu ila egyahay aniga. Haddii terminaalku shaqeyn waayo waxaan isku dayeynaa ctrl + alt + f [1-6] oo halkaas ayaan ka qabannaa.
Jawaab Iago Martínez Ocaña
Maxay yihiin wiilasha caqliga leh ee ku mahadsan caawimaadda ay i siiyeen aniga oo gacanta ku haya qoraalkan !!!
Ku jawaab Anatonia
Salaan! Ma noqon kartaa in amarka xkill uu kaliya ka dhigo barnaamijka X inuu baaba'o welina uu furan yahay? Sababtoo ah marwalba way igu dhacdaa markaan u tago maamulaha hawsha hawshu wali way nooshahay waana inaan dilaa.
Waan qirayaa, waxaan ahay nin cusub. Iyo amarrada killall iyo pkill ayaa wax badan iga caawin doona. Waad ku mahadsantahay soo gelintooda, blog aad u wanaagsan.
Jawaab Octavio Villanueva
Waxaan kugula talinayaa htop is waa tan ugu fiican taas ...
la shaqeeya kalkaaliyayaasha caafimaadka
sudo apt-hel rakib htop
Ku jawaab heberth ardila
pidof ma ahan Unixes oo dhan, tusaale ahaan Solaris ma laha amarkaas, taasna waxay nagu hogaamineysaa inaan adeegsanno ps-ga awoodda badan.
Ku jawaab liyon
htop waa ereybixin badan oo isticmaal badan
Ku jawaab dub
Xaalada adeegsiga PID, waxa saxda ah waa $ dila PID oo u diraya calaamadda SIGTERM asal ahaan, haddii ay dhacdo in howshu aysan ka soo jawaabin, $ dila -9 PID ayaa la isticmaalaa oo soo dirta calaamadda SIGKILL, kan dambe ayaa tirtiraya geeddi-socodka iyada oo aan loo oggolaan isla xiritaanka si sax ah (waxaa jiri kara xog lumis tusaale ahaan). SIGTERM ayaa ku weydiinaya fadlan, SIGKILL wuxuu siiyaa faasas 🙂
Aad baad u mahadsantahay, waan tijaabin doonaa hadii ay markale igu soo dhacdo.
weydiin. Marka jawiga desktop-ka laga soo laalaado Ubuntu (Waxaan u adeegsadaa Midnimada), dib ma loo bilaabi karaa iyada oo aan la dilin dhammaan howlaha kale? Anigu aad ugama hormarin linux-ka wuuna igu dhacaa mararka qaar anigoo shaqeynaya wuuna sudhan yahay, waxa kaliya ee aan sameeyo ayaa ah dib u bilaabida amaanka, laakiin waxaan lumiyay wax walboo aan ku shaqeynayay.
Ma aqaano in shakigayga la fahmay.
Nidaam ka socda gobolka zombie looma dili karo habka dhaqanka.
Halkaan waxaad ka heleysaa faahfaahin dheeraad ah: esdebian.org/wiki/matar-proceso-zombie
Ku jawaab StallValds
Kuwa aadka u horumarsan, sidee u dileysaa geedi socodka gobolka ZOMBIE?
kaliya si loo abuuro sheeko yar 😀
George Vips dijo
Aad u wanaagsan, waa wixii aan u baahnaa ..
Jawaab Jorge Vips
Runtu waxay tahay amarka dilku inuu waxtar badan leeyahay. Awood u lahaanshaha in lagu dilo geedi socodka dhibka leh kaliya adoo codsanaya dilka waa wax weyn. Ugu dambayn amar u adeega wax.
Su'aal aragtiyeed: Dilka hanaan micnaheedu waa inay shaqada joojiso. Marka su’aashaydu waa mida kale, hadaan rabo inaan dib u bilaabo hawshaas aan dilay, sideen ku sameeyaa?
Waa hagaag tahay waxaad dhigtaa ./( magaca nidaamka) &
tan waxaad mar kale ku wadaa PID-kaaga sidoo kale wuu soo bixi doonaa 😀
Aad u fiican, waxaan haystay waqti aan ku raadiyo caawimaad sidan oo kale ah. Aad ayey ii anfacday. Aad baad ugu mahadsantahay wadaagistaada.
Salaan ka timid San Luis Potosí, Mexico.
Jawaab JC Rivera
Sideen u dili karaa laba geeddi-socod anigoo og PID-kooda isla amarka?
Waxaan u maleynayaa inay ahayd 'dil [PID Koowaad] [Second PID]
Maqaal aad u xiiso badan. Websaydhkani waa websaydhkayga ugu muhiimsan ee Linux.
Guud ahaan waxaan isticmaalaa:
ps ax | grep process_name (tan si looga helo nidaamka)
dil -9 process_id
Waxaan la wadaagayaa koorso bilaash ah oo bilaash ah oo internetka ah oo ku wareegsan:
https://aprendemia.com/cursos/curso-de-bash-scripting Waxaan rajeynayaa inay waxtar yeelan doonto.
Ku jawaab Gauchita Watafak
oo hadaan rabay inay noqoto astaan ​​Linux ka mid ah kii xirmay sidii la rabay?
tusaale waxaan haystaa 2 astaamo oo Firefox ah
laakiin waxaan kaliya doonayaa hal muuqaal oo aan xiro
Waxaan rabaa kaliya profile 2 inuu xirmo sida amarku yahay
ka hor mahadsanid jawaabta
sideen u dili karaa geedi socodka hore ee ubuntu, iyada oo hal khad amar ah
Ku jawaab Moi